gtalk offline လေနဲ gtalk skin လှလှလေးတွေအာပေးကြပါအုန်ဗျာ — MYSTERY ZILLION
gtalk offline လေနဲ gtalk skin လှလှလေးတွေအာပေးကြပါအုန်ဗျာ
July 2009 edited August 2010 in Freeware
gtalk Skin လှလှလေးတွေပါ
အရမ်းမိုက်တယ် ။ အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ် ။ ခုပဲ ဒေါင်းသုံးမလို့ Ifile ကြီးနဲ့ ဖြစ်နေတယ် ။ ဒေါင်းလို့ မရဘူး ဖြစ်နိုင်ရင် rapidshare ကတင်ပေးပါလားဟင်
ကျွန်တော်မှာ rapidshare အကောင့်မရှိဘူဗျာ:D
gtalk skin လှလှလေးတွေပါ၃မျă
ဘယ်မှာပေးထားတာလဲချင်၊ တွေ့၀ူး။ နာများကန်းနေလားလို့။ :d
ှုင်္Ifile.it နဲ ့က ဘယ်နားရေးထားတာလဲဟင် တွေ ့၀ူးနော်...
Media Fire က download မရဘူးဖြစ်နေတယ်...
ပြန်တင်ပေးနော် ကိုရေလိုအေး လေးရယ်....
ရပြီဗျို့ ဒေါင်းသွားတယ် ..
လုပ်စားလိုက်ဦးမယ် :d :d
ဟုတ်ကဲ့. ခေါင်းစဉ်မှာက gtalk offline လေးလို့ပြောထားတယ်ဗျာ။ အဲ့ဒါကို ဒေါင်းပြီးတော့ offline mode ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲမသိဘူးဗျာ။ နည်းနည်းပိန်းလို့ရှင်းပြပါဦး
အစ်ကို ရေ available နာကdown arrow လေကို click လိုက်ရင်invisible ကိုတွေတယ်လေ အေကောင်းလေကိုclick လိုက်ရင် offline chat လိုရပြီလေ:P
ကျနော် ဒေါင်းလိုက်တော့ အဲ့ဒီပုံမှာပြထားသလိုထွက်လာတယ်။ ဘယ်ဟာကိုပဲ Run Run ပြောတဲ့ Invisible မပါဘူး။ Labs Editions ကတော့ Short cuts ပဲတွေ့ရတယ်။
အေတာကgtalk offline မှာတင်မိတာ အေမှာ Short cuts ပဲပါတယ်
gtalk offline က
Gtalk offline က mediafire နဲ. ဆိုတော. ဒီမှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ လို. မရဘူး။
I file နဲ.တင် ပေးပါဦး
gtalk offline လေပါ
page 1 မှာ ifile နဲ ့တင်တာရှိပါတယ်.......ဒီမှာ down ပါဆိုတာ ifile link ပေါ့...အဆင်ပြေပါစေဗျာ
ဒေါင်းလို.ရပါသည်။ သို.သော် အင်စတော လုပ် ၇င် Error ပြ နေပါသည်။
ဘာဖြစ်မှန်းမသိပါ။ Error numbers မှာ 0x80072eez ဟု ဖေါ်ပြ ထားပါသည်။
ကျွန်တော် ဘာဆက် လုပ် ရမလဲ အကြံ ပေးပါဦး ခင်ဗျာ။
ဘယ်လို error ဖြစ်တာလဲဗျာ ပြောပြပါလာ
ဖိုင်လေးက run လိုက်တိုင်းမှာ internet connection တောင်းပြီး ဒေါင်းလုပ်ချတယ်။ပြီးမှရတယ်။ သူ့ကို exit လုပ်ပြီး ပြန်run တိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်။ installer သီးသန့် လဲ မဟုတ်ဘူးနော်။ရှင်းပြပါဦး။
gtalk offline ရလို. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..gtalk skin လှလှ လေး ကဘယ်နားမှာယဲဟင်..စိတ်မချိပါနဲ. အနော်က တုံးလို.ပါ..
ဒီမှာယူာနော်http://ifile.it/9yh4vgd gtalk skin
sorry bro yaeloeaye
ဒါပေမယ့် sign in ၀င်တာ ရိုးရိုး ထက်စာရင် နဲနဲ ပိုကြာတယ်နော်။
မြန်မာလို လဲ ရိုက်လို့ မရဘူးနော်.. ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတုန်း ခင်ဗျာ..
လုပ်ပါဦးဗျ ။ :39::39::39:
ကျွန်တော်၀င်တော ့၀င်တက်တယ်ဒါပေမဲ ့ပြန်မထွက်တက်လို ့ကြူးမီးကား အဲ ့လေကယ်ပါဦးဗျာ:106::2::39:
install လုပ်ပြီးရင် ကွန်ုပြူတာရဲ. ညာဘက်က g talk sign လေးကို right click နှိပ်ပြီး ၀င်သလိုပဲ ထွက်ရင် လညး် အဲလိုပဲ ပြန်နှိပ်လိုက်ပါ။ sign out ဆိုတာလေး ကိုတွေ.ပါလိ်မ်.မယ်နော်။ အမ်ဇက်က မောင်နှမတွေ ဖြေတာမတွေ.သေးလို.ပြောပြတာပါ ။
(အမှားပါရင် ခွင်.လွှတ်ပါ..တတ်လို.ပြောတာမဟုတ်ပါဘုူး ကိုယ်တွေ.လေး ကိုမျှေ၀တာပါ)
offline gtalk for windows7(google talk labs edition)
အစ်ကိုရေ အော့လိုင်း တော့ရပါတယ် ဒါပေမယ် ဟီး မြန်မာလိုမရဘူး မြန်မာလိုရမဲ့နည်းလေးရှိရင်ပြောပြပေးပါနော်
ပိန်းတယ်လို့ပြောရင်လည်းပြောပါတော့ဗျာ တကယ်သိချင်လို့ပါ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ မြန်မာလိုရရင်တင်ထားချင်လို့ပါ
Download Link expire ဖြစ်နေဘီဗျို့ ထပ်တင်ပေးပါအုံးနော်:rolleyes::rolleyes: